Ciidamada Booliska Kenya ayaa waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyeen Keynta Boni oo ku tal Xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Goobaha howlgalka laga sameeyay ayaa waxaa marraka qaar weeraro abaabulan ka qaada Xubno ka tirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Ciidamada booliska Kenya ee howlgalka hoggaamineysay.
Guddoomiyaha dowladda Kenya u qaabilsan ismaamulka Lamu Irungu Macharia ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay laba dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo hubeysnaa.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Keynta Boni ay tahay gob
oo xigta dhanka xadka Kenya iyo Soomaaliya ayay ciidamada ammaanka ay ku dhuumaaleystaan Al-Shabaab sidaas awgeedna la sii wadaya howlgallada halkaasi looga saarayo.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Lamu ayaa shacabka deggan agagaarka keynta Boni ugu baaqay in ay feejignaadaan Xubnaha Shababaab ee degaankooda galaya, isaga oo sidoo kale ka codsaday inay Ciidamada kala Shaqeeyaan sugida amniga.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ay weeraro kala duwan ka fuliyeen degaano ka tirsan Gobolka Waqooyi Bari, weeraradaas oo badankood lala bartilmaameedsaday saldhigyo Ciidan iyo Xarumaha Shirkadda Isgaarsiinta Safaricom ee laga leeyahay dalkaas.
Previous articleXisbiyada Mucaaradka Somaliland oo ku dhawaaqay Isbaheysi Siyaasadeed
Next articleCabdiraxmaan Cabdishakuur: “Wixii aan Farmaajo ka diidnay, Rooble ka yeeli meyno”